18 qof oo ku dhimatey xarunta UN-ka ee dalka Nigeria oo la qarxiyey (Video+Sawiro) – SBC
18 qof oo ku dhimatey xarunta UN-ka ee dalka Nigeria oo la qarxiyey (Video+Sawiro)
Ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhimatey tiro kalena way ku dhaawacmeen ka dib markii qarax loo adeegsadey baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxshey lagu qarxiyey kadinka hore ee dhismaha xarunta qaramada midoobay ee magaalada Abuja ee caasimada dalka Nayjeeriya.
Dadka ku dhintey qaraxa ayaa la filayaa inay kordhaan maamada tobanaanka qof ee qaraxaasi ku dhaawacmey ay qaarkood ku sugan yihiin xaalad adag, iyadoo sidoo kale qaraxu uu waxyeelo ba’an gaarsiiyey dhimaha oo burbur xoogan uu soo gaarey.
Qaraxa waxaa loo adeegsadey baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxshay oo la soo dhigay banaanka xarunta UN-ka, waxaana wararku sheegayaan in qaraxu uu ahaa Ismiidaamin.
Warsaxaafadeed ka soo baxay kooxda Islaamiga ah ee Boko Haram ayey ku sheegteen masuuliyada qaraxa waxaana ay sheegeen inay iyagu fuliyeen.
Ka hor intii aanay soo saarin warsaxaafadeedka kooxda Boko Haram waxaa qaraxa ka hadley madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan kaasi oo sheegay inaanay dawladiisu dib uga weecan doonin la dagaalanka wax uu ku tilmaamay argagixisada, wuxuuna sheegay in dawladiisu aanay waxba ula hareyn sidii cadaalada u horkeeni laheyd dadkii ka dambeeyey qaraxaasi.
Xoghaha guud ee qaramada Ban Ki-moon ayaa ku tilmaamay qaraxa “Weerar loo geystey dad nolashooda u hurey caawinta dad kale”.
Qof marqaati ah ayaa sheegay in qaraxu uu ahaa baabuur ku qarxay markii uu isku dayey in uu xoog kaga gudbo laba jidgooyo oo halkaasi tiil.
Dadka dhaawaca ah oo ka badan 60 qof ayaa la soo sheegayaa inay qabaan dhaawacyo halis ah iyadoo Isbitaaladu ku dhawaaqeen baahi gargaar dhiig oo deg deg ah.
Boko Haram, oo ah koox Islaami ah waxay u dagaalamaysaa in dalka Nigeria laga hirgaliyo shareecada Islaamka, waxay kaloo sheegteen weerar caynkan oo kale oo lagu beegsadey xarumaha Booliiska dalkaasi bishii June ee sanadkan.
Sarkaal ka tirsan qaramada Midoobay oo ku sugan Nigeria oo codsadey inaan magaciisa la sheegay in ayaa sheegay in xarumaha qaramada midoobay ee dalkaasi amaankooda si aad ah loo adkeynayey ka dib markii uu soo baxay war ku aadan in Qaramada Midoobay ay bartilmaameed u tahay kooxda Boko Haram.
Quburada ayaa aaminsan in weerarkan uu xiriir la leeyahay wax loogu yeeray argagixisada caalamiga ah.
“Waynu dhaleecaynaynaa weerarkaasi.kaasi oo ah mid aad u xun gabi ahaanba” ayuu u sheegay saxaafada xogaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-Moon.
Mr Ki-moon wuxuu sheegay in uu Nigeria uu dirayo labadiisa kuxigeenka Asha-Rose Migiro *& kuxigeenkiisa dhanka amaanka Gregory Starr.
Goor dambana ah Mr Ban wuxuu u sheegay golaha amaanka in weerarkan uu u yahay “Cadeyn in xarumaha qaramada midoobay ay si sare u kacayso ay ugu muuqanayaan bartilmaameed jilicsan kooxaha xagjiriinta & nabad diidka aduunka” sida hadalka uu u dhigay.
Wasiirka arimaha dibada Nigeria Viola Onwuliri ayaa sheegtey inay booqatey dhismaha la qarxiyey isla markaana ay soo aragtey “wajiyada dadka oo argagax uu ka muuqdo”.
“Kani ma ahan weerar Nigeria lagu soo qaadey balse waa mid ku jaheysan beesha caalamka, waa weerar aduunka” ayey tiri wasiirku.
Dhismaha la qarxiyey waa xafiiska ugu weyn ee qaramada midoobay dalka Nigeria waxaa halkaasi degan 26 hay’ado ka shaqeeya gargaarka & horumarinta.
Dhismaha waxaa ka shaqeeya 4 boqol oo shaqaale qaramada midoobay ka tirsan, laakiin lama oga inta gudaha ugu jirtey dhismaha xiligii weerarka.
Goobta la weeraray waa aag diblumaasiyadeed waxaa sidoo kale dhismaha UN-ka ee la qarxiyey ku dhaw dhismaha safaarada Mareykanka ee dalka Nayjeeriya.
Daawo Video ku saabsan qaraxan baabuur oo ay soo galiyeen bar Internet kooxda Boco Haram, filimka sawiro naxdin leh ayaa ku jira fadlan caruurta yar yar, haweenka uurka leh & dadka qalbiga jilicsan yaanay daawan.